တုိုယုိုတာကား ကုမ္မဏီ၏ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်လာပြီ - MM Live News
တုိုယုိုတာကား ကုမ္မဏီ၏ တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်လာပြီ
May 31, 2019 MM Live News
မင်္ဂလာပါ တိုယိုတာ Facebook ပရိသတ်များခင်ဗျာ!
လူကြီးမင်းများရဲ့ တိုယိုတာကို ယုံကြည်ချစ်ခင် အားပေးမှုကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ စီမံကိန်းအသစ်ကို အသိပေးခွင့်ရတဲ့အတွက် အထူးပင်ဝမ်းသာမိပါတယ်။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို တိုယိုတာမော်တော်ကော်ပိုရေးရှင်းမှ အောက်ပါတရားဝင်ထုတ်ပြန်စာမှာ ကြည့်ရှူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်တိုယိုတာစက်ရုံတည်ထောင်မည်ဖွံ့ဖြိုးလာသောမြန်မာ့မော်တော်ယာဉ်ဈေးကွက်တွင် Toyota Hilux ယာဉ်များပြည်တွင်း၌တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်မည်
တိုယိုတာစီးတီး၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ၂၀၁၉ခုနှစ် မေလ(၃၀)ရက်။ တိုယိုတာမော်တေ်ာကော်ပိုရေးရှင်း(တိုယိုတာ) အနေဖြင့်၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထမဦးဆုံးသော မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည့် တိုယိုတာမြန်မာ ကုမ္ပဏီလီမီတက် (Toyota Myanmar Co., Ltd, TMY) ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ကာ ပြည်တွင်း၌ Toyota Hilux အမျိုးအစား မော်တော်ယာဉ်များအား တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှု နှင့်အညီ ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွင်း မော်တော်ယာဉ်အသစ် ဝယ်လိုအားမှာ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း တစ်ဟုန်ထိုး တိုးတက်မြင့်မားလျှက်ရှိပါသည်(၂၀၁၈ ခုနှစ် ဈေးကွက်အချက်အလက်များအရ စီးရေ (၁၈,၀၀၀)ခန့် ရှိခဲ့ပြီး ယင်းမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ကာလကထက် ၂.၁ ဆ ကျော်ရှိပါသည်)။
တိုယိုတာအနေနှင့် အခုလက်ရှိ Toyota Hilux, Vios, Rush နှင့် အခြားအမျိုးအစားယာဉ်များတင်သွင်း ရောင်းချလျှက်ရှိကာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ တိုယိုတာမြန်မာ (TMY) ကိုတည်ထောင်ပြီး ပြည်တွင်းဝယ်ယူအားပေးကြသည့် စားသုံးသူများ တိုယိုတာမော်တော်ယာဉ်များအား ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ပိုမိုရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရစေရန်အတွက် လုပ်ငန်းများအားတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ရည်ရွယ်ပါသည်။
တိုယိုတာမြန်မာ (TMY) စက်ရုံအား နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးမြို့တော်ရန်ကုန်မြို့တောင်ဘက်ရှိ သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်အတွင်း တည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုပမာဏမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၅၂.၆)သန်း ရင်းနှီးမြှပ်နှံမည်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်သားအင်အား (၁၃၀) ခန့်အပ် လုပ်ငန်းလည်ပတ် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်သည့်အချိန်မှ စတင်ကာ တစ်နှစ်လျှင် Toyota Hilux စီးရေ (၂,၅၀၀) အား SKD (Semi Knock Down) စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ် သွားရန် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။
မြန်မာဈေးကွက်အတွင်းမှ စားသုံးသူများ၏ လုိုအပ်ချက်နှင့် အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သော ထုတ်ကုန်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များအား ဆက်လက်တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးရန်အတွက်၎င်း၊ မြန်မာ့စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက်၎င်း၊ တိုယိုတာမော်တော်ယာဉ်များ ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုမှတစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ တတ်ကျွမ်းသော လူသားအရင်းအမြစ်စွမ်းရည် ဖွံဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက်၎င်း တုိုယိုတာမှ ဆက်လက်ကြိုးပမ်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
Toyota Myanmar Co., Ltd မှတ်စုအကျဉ်း
တည်နေရာ :သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
အစုရှယ်ယာပါဝင်မှု :Toyota Motor Corporation (၈၅%)
Toyota Tsusho Corporation (၁၅%)
တည်ထောင်မှုရက်စွဲ :ဇွန်လ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် (လျာထား)
စီမံခန့်ခွဲမှု အမှုဆောင်အမည် :Mr. Yoshihisa Tonozuka
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအား :တစ်နှစ်လျှင် စီးရေ (၂၅၀၀) (လုပ်ငန်းအချိန်တစ်ဆိုင်းစနစ်ဖြင့်)
ထုတ်လုပ်မည့်ယာဉ်အမျိုးအစား :Toyota Hilux
ထုတ်လုပ်မှုစတင်မည့်အချိန် :ဖေဖော်ဝါရီလ၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်
ဝန်ထမ်းအင်အား :(၁၃၀) ဦး (ခန့်)ဆက်သွယ်ရန် :ရန်ကုန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးတိုယိုတာမော်တော်ကော်ပိုရေးရှင်းဖုန်းနံပါတ် (၀၁) ၉၃၄ ၅၁၉၆
Mingalabar! Toyota Facebook fans.
From Chief Representative of Yangon Representative Office, Toyota Motor Corporation.
Thanks to your strong support, we are pleased to announce our new project in Myanmar. For the details, please see official message from TMC as below.
Toyota to Establish New Plant in Myanmar
Toyota will produce the Hilux locally in Myanmar where the automotive market is expected to expand —
Toyota City, Japan, May 30, 2019—Toyota Motor Corporation (Toyota) has decided to establish Toyota Myanmar Co., Ltd., (TMY) as its first vehicle production company in Myanmar where it will locally produce the Hilux from February 2021.
The automotive market in Myanmar, in accordance with the growth of the economy, the demand for new vehicles has soared in recent years (2018 market: approx. 18,000 units, 2.1 times more than the previous year). Toyota currently sells the Hilux, Vios, Rush, and other vehicles in Myanmar by relying on imports, but will establish TMY in June 2019 and promote initiatives that will allow even more customers to choose Toyota vehicles, in preparation foramarket that promises to continue expanding steadily.
Toyota plans to construct the new TMY plant in the Thilawa Special Economic Zone, situated in the southern suburbs of Yangon city, the country’s largest metropolis. Investment is expected to be approx. 52.6 million USD. Toyota plans to hire approx. 130 new employees, and intends to build approx. 2,500 Hilux vehicles per year using the SKD (semi knock-down) method when operations begin in 2021.
Toyota will strive to provide products and services that continue to meet the needs of customers in Myanmar, and develop human resources for manufacturing through local production, to contribute to the development of industries in Myanmar.
Reference: Overview of Toyota Myanmar Co., Ltd. (TMY)
Location: Thilawa Special Economic Zone, Republic of the Union of Myanmar
Equity participation: Toyota Motor Corporation 85%
Toyota Tsusho Corporation 15%
Date of establishment: June 2019 (planned)
Executives: Managing Director: Yoshihisa Tonozuka
Production capacity: 2,500 units per year (one shift)
Production models: Hilux
Start of production: February 2021
Employees: Approximately 130
ခြင်ရိုက်ဘတ်တံမှ ဓာတ်ဆီပုလင်းအား မီးကူးစက်လောင်ကျွမ်းပြီး အမျိုးသမီး နှစ်ဦး သေဆုံး
သားမယားပြုခြင်းကို ခံခဲ့ရသည့် (၇)တန်းကျောင်းသူမိန်းကလေးရဲ့ ဘဝပေးအခြေအနေ
မောင်တောတွင် ရဲဒုတပ်ကြပ်ထံမှ ကျပ်သိန်း ၃ သောင်းကျော်တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးများ ဖမ်းမိ
March 21, 2019 MM Live News
May 1, 2019 MM Live
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်တွင် မိဘမဲ့ ၄ တန်းကျောင်းသူကို ဦးလေးတော်စပ်သူက အဓမ္မပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွား
October 23, 2018 MM Live
စုံထောကျဉာဏျရှိတဲ့ ဖုနျးပွငျဆိုငျကိုမှ လော့သှားဖှငျ့ခိုငျးမိတဲ့ ဖုနျးသူခိုးရဲ့ အဖွဈ…
December 15, 2019 MM Live
အတှအေ့ကွုံသဈတှေ လိုခငျြတဲ့ မနူးမနပျ ကောငျလေးနဲ့ တှခေဲ့သော ည ငှကျမလေးတဈယောကျရဲ့ ကွကှေဲစရာဖွဈရပျ’
ခရီးစားရိတျပွတျပမေယျ့ သား ဇောနဲ့ မွဈကွီးနားအထိ လမျးလြှောကျပွီး ရှာနတေဲ့ အဖေ….
”2020 နှဈ ”ထဲမှာ ဘဝတဈဆဈခြိုး ပွောငျးလဲမညျ့ ”ဇာတာရှငျ နဖှေ့ားမြား” ….
December 15, 2019 December 15, 2019 MM Live
စိတျမရှညျပဲကြျောတကျလိုကျတော့ ပှဲခငျြးပွီးသရေပွီပေါ့ ကားမောငျးသူမြား စိတျရှညျရှညျထားပါ